Ọ bụrụ na ị na-achọ ndị kasị mma mgbasa ozi ọkpụkpọ na-eche nke otu onye na-ahọrọ; VLC ma ọ bụ MPlayer, isiokwu a ga-enwe ike inyere gị. Ọ na-agụnye a zuru ezu tụnyere n'etiti abụọ ndị a na-ewu ewu media egwuregwu. Ugbu a na-agụ na na chepụta nke na otu onye bụ nri ọkpụkpọ maka onwe gị.
Okwu Mmalite nke MPlayer na VLC
MPlayer bụ a free, na-emeghe-isi na ukwuu-obere multimedia ọkpụkpọ. Ọ malitere dị ka a Linux mgbasa ozi ọkpụkpọ ma mgbe e mesịrị akp ya ​​nkwado ka Windows. Ọ bụ ike nke na-akpọ nta ka ọ bụla ẹdude media formats gụnyere AVI, MKV, RMVB, MP4, MOV na wdg Ọ bụ na-eru nke na nbudata na-azọpụta nkwanye videos. Ma nke kasị njọ akụkụ bụ na ọ bụ nnọọ mgbagwoju iji, karịsịa maka beginners.
VLC bụ ihe ọzọ dị ike na-eju media ọkpụkpọ. Ọ na-ekwe ka ị na na fọrọ nke nta niile ụdị nke video na ọdịyo formats. Ọ na-n'ọtụtụ ebe na n'ihi na nke lightness na mfe na-eji interface na elu arụmọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ị nwere ike mfe melite gị onwe mmasị customization nwere elu atụmatụ.
Tụnyere n'etiti VLC na MPlayer
Sistem Windows / Linux / Mac OS X / iOS / Android Windows / Linux / Mac OS X
Ọhụrụ Version 2.0.6 1.1.1
Kasị nso-nso Ụbọchị mwepụta Apr 11, 2013 May 5, 2013
Original Ụbọchị mwepụta Feb 1, 2000 Sep 2000
Akwado Formats .wav, .mp3, .mp4, .aac, .wma, .ogg, .ra, .avi, .mov, .xvid, .mpeg, .3gp, .asf Ọkpụkpọ na, .asx, .flv, .m2p na wdg .wma, .mp3, .mp4, .ogg, AAC, .mkv, .xvid, DivX, .avc, .avi, .flv na wdg
Mma Player karịa MPlayer na VLC
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị mfe na-eji ma niile-na-otu mgbasa ozi ọkpụkpọ, na Wondershare Player ga-a mma nhọrọ. Ọ na-akwado fọrọ nke nta niile nke ọtụtụ ebe e ji na-ewu ewu formats dị ka WMV, AVI, MKV, Ogg, OGM, 3GP, Real Media, QuickTime na ọtụtụ ndị ọzọ. Na ya, i nwere ike na-agba ọsọ ọ bụla video ma ọ bụ ọdịyo faịlụ seamlessly n'ihi na ọ bụ fechaa na-ewe dịtụ ala CPU ebe nchekwa ojiji. Na n'elu nke, usoro ihe omume faịlụ onwe ha na-efu obere oghere na draịvụ ike. Nke a pụtara na ị pụrụ-agba ọsọ ahụ Wondershare Player mgbe multi-tasking n'achọghị banyere gị usoro kefriza si ma ọ bụ mkpọka. Ihe bụ ihe ọzọ, ya abịa na a dị ọcha ma tinye-free interface na ike ka ị na mfe kpatụ video na ọdịyo ntọala dị ka gị mkpa.
NTSC vs PAL - Ihe nile banyere NTSC na PAL
Olee otú Download Music Videos Free si YouTube
Olee otú Naghachi ehichapụ AVCHD Videos
> Resource> Video> MPlayer vs VLC- Kedu onye dị mma?